KHUDRADDA GEEDKA DABIICIGA AH: WAXYAABAHA QORAXDA LEH EE JIIL CUSUB, SHARAXAAD IYO SAWIR - DHISMAYAASHA
Ivanova khudradda sunna - waa goosasho weyn oo leh waqti iyo dadaal yar.
Guryaha lagu koriyo iyo lagu koriyo oo loogu talagalay dalagyada kulaylka-jecel ee aagga beeraha khatarta sare leh waa kuwo caan ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan dhamaanteen uqornay dhismooyin caadi ah oo caadi ah, taas oo shuruudaha sii kordhaya khudradda iyo ubaxa ay isku mid yihiin.
Sunny Sunny ayaa leh tiro ka mid ah kala duwanaanshaha aasaasiga ah laga bilaabo qaababka beerta dabiiciga ah si dhirta hoyga laga soo qaado.
Mucjisada qurxinta leh muuqaal cajiib ah
Geedka khudradda - aqalka dhirta lagu koriyo ee jiilka cusub, nooc ka mid ah aqalka dhirta qorraxda, oo uu soo saaro physicist A.V. Ivanov. Dhismaha waxaa la dhisay 50'aadkii qarnigii la soo dhaafay, isla markiiba wuxuu soo bandhigay fursado cajiib ah hel wax soo saarka weyn ee deegaan kasta.
Beeraha beerta dalxiis ee khudaarta ayaa kuu ogolaanaya inaad hesho beer goosasho bil ka hor, qiimahana si weyn ayuu u kordhay.
MUHIIM: Kuleylka qoraxda ayaa kuu oggolaanaya in aad kor ugu qaadato qorshahaaga gaarka ah ee dhaqamada dhaqameed ee Ruushka, laakiin sidoo kale dhirta aadka loo qoondeeyay, beerista taas oo aan macquul ahayn aqalka lagu koriyo ee caadiga ah.
Muuqaalka dhismaha wuxuu u eg yahay aqalka dhirta lagu koriyo ee caadiga ah, inta badan laga helo degaanno badan oo banaan. Farqiga aasaasiga ah wuxuu leeyahay qaabdhismeed gudaha ah ee khudradda.
Vegetarian Vegetarian Ivanova - burburinta dhammaan fikradaha ah ee koritaanka dalagyada kulaylka-jecel ee meelaha bannaan. Laga soo bilaabo dhismaha aqalka dhirta ama aqalka dhirta lagu koriyo oo lagu gartey xuduudaha soo socda:
Macmacaanka uma baahnid kuleyl dheeraad ah heerkulku wuxuu bilaabmayaa ka yar 10 darajo. Qaab dhismeedka xaaladaha noocaas ah, heerkulka waxaa lagu hayn doonaa 18-20 digrii. Haddii dhaxan habeenku ka dhaco qiyaas ahaan 15, dheelitirka waxaa lagu hayaa gudaha 12 darajo;
Qalabka cagaaran ee loo yaqaan 'greenhouse-greenhouse Ivanova waxaa la siiyaa qaas ah Nidaamka wareegga hawadaMeelaha gudaha ee khudradda ah uma baahna hawo qaadasho. Muxuu muhiimad gaar ah u leeyahay inta lagu jiro nidaamkan aqalka dhirta lagu dhejiyo lumiyo, nitrogen iyo carbon dioxide, iyo joogitaanka walxahaas hawada ku jira ayaa lagama maarmaan u ah horumarka dhirta;
In khudradda dhirta si fiican u qoyaansidaas darteed uma baahna biyo badan.
WARBIXIN: Ivanov oo ku yaal agagaarka 17 hektar ayaa la koray xitaa duurjoogta koonfurta. Goosashada tamaandhada iyo qajaarka waxay u dhigantaa 44 kg halkii kiilomitir. Tani waa maqnaanshaha tiknoolajiyada casriga ah ee casriga ah, waxay abuurtay kaliya qarniga 21aad.
Waa maxay faa'iidada naqshadeynta?
Vegetarian Vegetarian Ivanova waxay leedahay qaab gaar ah, taas oo ay sabab u tahay isticmaalka ugu badan ee tamarta qoraxda si loo ilaaliyo microclimate gudaha ah.
Dhab ahaantii, waa dhisme qaab ah oo saqaf ah, saqaf cad. Duufaanta waxaa loo qaabeeyey xagal qiyaastii 20 darajo.
Saqafka khudradda ayaa si aan caadi ahayn u iftiiminaya. Doorashada ugu habboon waa polycarbonate cell. Dhinaca iyo derbiyada hore ee khudradda ayaa sidoo kale laga dhisay polycarbonate ama dhalo.
Kooxda waqooyiga waxaa la dhisi doonaa caasimadda daboolay foornada muraayada ama rinji leh rinjiga dhaldhalaalka cad. Ikhtiyaar ahaan, khudradda waxay kuxirantahay derbiga guriga, dusha iyo xataa xayndaabka. Laakiin waad dhisi kartaa dhismo gaar ah, oo leh caasimadda derbiga waqooyiga.
Haddii khudradda si gooni ah looga dhiso guriga, waa la talin si aad u diiriso derbiga gadaashiisa waraaqaha xumbada. Heerka sare ee darbiga waqooyiga guska waa inuu ahaado laba ilaa laba iyo mitir nus.
Qorraxda qoraxda waxay ku dhacdaa khudradda iyada oo loo marayo saqafka hareeraha iyo derbiyada, oo ku urursan, oo ka tarjumaya darbiga derbiga danbe.
Iyo hoos u dhigidda qorraxda, tamar badan ayaa loo isticmaalaa gudaha khudradda. Meelaha dhismaha ee qiyaasta 25 darajo, waxay kordhisaa nuugista kuleylka, marka la barbardhigo qaababka caadiga ah, 3-4.5 jeer.
Sida hannaanka gudaha ee aqalka dhirta qorraxda, sariiraha gudaha waxay ku yaallaan waqooyi ilaa koonfur. Duub kasta waxaa lagu dhejiyaa leben, alwaax ama xuduudaha.
Qorshahan xajmiga iyo derbigu wuxuu ka qaybqaataa ugu badnaan nalka qorraxda ee gudaha gudaha. Intaa waxa dheer, qaabka raajada waxaa loo yareeyaa inta ugu macquulsan, taas oo ah wuxuu yareynayaa qorraxda.
Tuubbooyinka gudaha khudradda waa in la sameeyaa cidhiidhi, oo leh xannaanado ballaadhan oo u dhexeeya iyaga. Dhirta gudaha waxay leedahay cabbir aad u wanaagsan, sidaas darteed waxay u baahan yihiin garaf si ay u harteen trellis, oo ku dhawaad ​​saqafka hoostiisa.
WARBIXIN: Xilliga xagaaga, naqshadeynta khudradda waxay kuu ogolaaneysaa inaad kordhiso tamarta 5 jeer, xilliga qaboobaha - 20-21. Haddii ay dhacdo baraf ku-meelgaar ah, marka laga reebo kuleylka, kululeeyaha sahlan ayaa la gelin karaa nidaamka hawo-qaadista, heerkulka gudaha isla markiiba kor u kaco.
Haddii uu jiro dhaxan ka hooseysa 15 digrii ee lagu koriyo wuxuu siin karaa kuleylka. Xaaladdan oo kale, khudradda ayaa ku habboon isticmaalka sanadka oo dhan.
Hawada isweydaarsiga ee lagu koriyo
Dhibaatada luminta dhexdhexaadinta nafaqada ee dhirta CO2 ee dhismaha Ivanov ayaa lagu xalliyaa abuurista xiran hawada wareegga wareega.
Qoto dheer ee ciidda, fogaan qiyaastii 35 sentimitir oo korantada ah iyo qiyaastii 60 sentimitir midba midka kale, tuubooyin (caag ah ama caag ah) ayaa la qariyaa. Tuubooyinka waxaa la dhigaa jihada koonfur-waqooyi. Dhamaadka tuubooyinka hoose ee hoose ayaa la keenaa dusha dhulka, iyo kuwa sare waxay ku xiran yihiin ururiyaha ku yaal tuubooyinka.
MUHIIM: Si aad u taariikhda, ugu habboon ee khudradda waa tuubooyin PVC ah. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in ay yihiin dhuuban-dusha iyo dhexroor aan ka yarayn 110 mm.
Tuubbo toosan oo leh qalab wax lagu dhajiyo ayaa lagu rakibay bartamaha ururiyaha, waxay saqafka ka soo rogtaa derbiga waqooyiga. Ka bixitaanka tuubada tooska ah ee khudradda waxaa la socda fan ah.
Isticmaalida furaha lagu rakibay qalabka wax lagu dhejiyo (meesha sare iyo hoose ee masraxa), heerkulka gudaha aqalka dhirta lagu koriyo ayaa la xakameynayaa. Dhirta qorraxda ee xilliga jiilaalka, marka heerkulka dibedda uu ka yaryahay toban, kuleylku wuxuu ku filan yahay inuu ku hayo heerkul ah 25 darajo.
Kuleyliyaha kuleylku waa ciidtaas oo ka soo baxaysa hawada. Kuleylka kuleylka ee qaybta sare ee dhismaha waa mid si toos ah loo rogay hoos. Habeenkii, waxaa jira dib u dhac ku yimid dib u soo celinta kuleylka ka soo laabta hawada.
Nidaamka hawo-mareenka ayaa la mid ah khudradda dhirta dhirta ka ilaaliyaa kulaylka kulaylka maalmaha kulul. Kulaylka dheeraadka ah waxaa la soo saaraa iyadoo la isticmaalayo tuubooyin isku mid ah. Qalabka hoose ee hooseeya ee taageere hadda wuu xiran yahay iyo furka sare ayaa u furan.
Xaaladdan oo kale, jihada socodka hawada ayaa isbeddela. Masraxa wuxuu ku dhexjiraa, hubinta heerkulka caadiga ah ee gudaha iyo ilaalinta dhirta laga bilaabo kuleylka.
WARBIXIN: Nidaamka hawada khudradda ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya ilaalinta qoyaanka ugu wanaagsan, taas oo si weyn u yareyneysa baahida loo qabo waraabinta dhirta.
Nidaamka waraabka ee cagaarka qoraxda
Wixii waraabka ee dhirta ku koray solarium, carrada iyo qoyaanka hawada ayaa loo isticmaalaawaxaa soo uruuriyay nidaam gaar ah oo habeysan oo ururin ah.
Boroobooyinka la dhigay ciidda, waxay leeyihiin godad hoose ee fogaan ah 15-20 cm midba midka kale. Ku gudbidda tuubooyinka qabow, hawada diiran waxay keenaysaa in la sameeyo qaabka kondhiyeynta ee derbiyada. Qoyaanka waxaa loo ururiyaa habkan ciriiriga ah ee ciidda, laga bilaabo halka ay ka nuugto xididdada dhirta.
Tuubooyinka hoostiisa, lakabka dhoobada la balaariyey ayaa la dhigay si loo faafiyo qoyaanka dhererka sariirta oo dhan. Waraabinta dibadda ee dalagyada waraabinta sida looma baahna..
Nidaamka waraabka ee isku midka ah, tayada biyaha sidoo kale waa isku mid. Waa gebi ahaanba bilaash oo ah cusbo iyo lime, halka ay ka buuxsanto ammonia oo ka soo jeeda qandhada dabiiciga ah. Haddii ay jirto xaalad la'aan qoyaan ku jirta aqalka dhirta lagu koriyo, waraabinta waraabka ayaa la bixiyaa.
MUHIIM: Waraabinta waxaa loo rogi karaa oo kaliya marka hawo-qaadashadu ay ka shaqeyneyso si looga fogaado in hawada lagu nadiifiyo.
Ururka noocan oo kale ah ee waraabka ayaa ugu wanaagsan ee dhirta.. Marka waraabinta lagu daboolo dusha sare, qoyaanku si firfircoon ayuu u baxaa, badankooduna ma gaadho nidaamka xididka. Caleemaha waraabahan, oo raadinaya in ay helaan qoyaan, waji dusha sare, oo sidoo kale si xun u saameeya koritaanka.
Geedka, sababtoo ah soo galitaanka qoyaan ee ciidda, waxay gacan ka geystaan ​​horumarinta dhirta awoodda leh, ugu yaraan waxay ku fiddoobeen qoyaan iyo nafaqada nidaamka xididka.
Abuuraha daaqa, AV Ivanov, wuxuu ku riyooday in farcankiisa uu diyaar u yahay guri walba si uu u kiciyo tamarta qorraxda iyo dadka degaankana leh khudaarta. Hadda ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu leeyahay fursad uu kaga faa'iidaysto abuuritaankiisa si kor loogu qaado wax-soosaarka goobta.
Sidoo kale boggayaga internetka, ka akhri qashinka beerta, beeraha polikarbonate iyo gacmahaaga.
Sawirada waxaad arki kartaa koriinka cusub ee dhalidda qoraxda: